Forum serasera malagasy Tsy ampy izany "fiovàna tsikelikely" izany - Dinika forum.serasera.org
Tsy ampy izany "fiovàna tsikelikely" izany
Fitohizan'ny hafatra : Tsy ampy izany "fiovàna tsikelikely" izany
Nehemiah - 27/02/2013 07:28
Lazain'olona matetika fa fiovàna tsikelikely ny evôlisiona, ka satria hita @ toerana rehetra @ karazan-jazamananaina rehetra izay fiovàna tsikelikely izay, dia mazava ho azy fa marina ny evôlisiona !
Kanefa betsaka ny manam-pahaizana mpandala ny fahariana manana traikefa izay milaza fa tsy mba vitan'izay ny evôlisiona : raha nanova ny môlekiola ho olombelona ny evôlisiona dia tsy ampy izany fiovana tsikelikely izany fa mila karazana fiovàna manokana : fiovana mitranga @ fomba natoraly izay manampy fahalalàna vaovao anatin'ny ADN, ary mbola tsy nisy olona nahita an'izay fiovàna izay.
Ny fodin'i Darwin sy ny lolo bambara ary ny mikrôba mizatra @ antibiôtika izay antitranterin'ny mpandala evôlisiona ho porofony dia manaporofo tsara fa misy ny fiovàna mitranga @ fomba natoraly fa saingy tsy misy @'izy ireo izay maneho fipoiran'ny fahalalàna vaovao anaty fototarazo izay mahatonga taova vaovao hiforona (ohatra : volomborona ho an'ny androngo. Aza mihomehy ianao, izay mihitsy anie no lazain'ny manam-pahaizana sasany : nitsiry volomborona ny dinôzôra t@ andro fahagola, nohon'ny antony mbola tsy voafaritra tsara, ka nanjary ireo vorona hitantsika @'izao fotoana izao, ka rehefa mandeha @ gargote ianao @ manaraka, dia aza mangataka akoho rony fa mangataha "dinôzôra rony").
Nefa iaraha-mahafantatra fa tsy afaka mamorona ny tenany ny prôgrama, ary tafiditra ao anatin'izany ny prôgraman'ny ADN, ka midika izany fa tsy maintsy misy mpamorona ny zavamananaina rehetra.
sitlo - 03/03/2013 11:46
Ny info vaovao dia avy any ivelany. Ny ao anatiny dia miova/manaraka fotsiny. Tahaka ny rano maka ny endriky ny atin'ny zinga. Fa rehefa afindra ao anaty siny dia maka ny endrk'iny ihany koa.
Tsy ny rano no nisafidy.
Nehemiah - 04/03/2013 06:45
Avy any ivelany aiza ? Tsy afaka mitondra info vaovao ny tontolo iainana fa tsy maintsy olona lalin-tsaina no manao an'izay.
Sady lamarckien loatra ny fampitahànao. Ny biby izay sendra manana sampona izay ahazoany tombontsoa @ tontolo iainany no mandrombona, fa tsy ny tontolo iainana no mamolavola ny génotype-n'ny biby
sitlo - 08/03/2013 03:07
Citation Tsy afaka mitondra info vaovao ny tontolo iainana fa tsy maintsy olona lalin-tsaina no manao an'izay.
Satria ny olona tsy anatin'ny tontolo iainana? Sa rehefa lalin-tsaina kokoa dia lasa andriamanitra kely?
Citation Ny biby izay sendra manana sampona izay ahazoany tombontsoa @ tontolo iainany no mandrombona, fa tsy ny tontolo iainana no mamolavola ny génotype-n'ny biby
Tsy misy Rakoto miteny hoe manaova an'izao ny tena izy. Fa resaka action/reaction ny fandehany. Tahaka an'ireny simia ireny fa mifampitohitohy lava be.
Nisy documentaire izay milaza ny lokon'ny felan'ny sarisarim-bomanga maro isakarazany sy ny lokon'ny lolo maro tao amin'ny alan'i Amazonia. Ny fandehany dia miova ny ADN'ilay sarisam-bomanga fa feno fanday loatra ilay izy. Io izany ilay avy any ivelany nolazaiko. Tsy ilay sarisarim-bomanga no nilaza tamin'ny fanday hoe manaova maro be fa ilay fanday no nankeo ka farany dia niova ny ADN-ny hampisy poizina azy. Ary niova nanaraka an'izay ny lokon'ny felany.
Dia vokatr'izay dia maro ny fanday no maty. Ka ny niafarany dia niova koa ny ADNn'ilay fanday hahatany ilay poizina. Tsy izy no niteny ny sarisarim-bomanga hoe vonoy izahay. Fa ny avy any ivelany, dia ny sakafony, no niova ka nihafara hatramin'ny fiovan'ny ADN-ny. Ary dia niova ihany koa ny lokon'ireo lolo.
Dia nitohitohy foana ka ny niafarany dia feno sarisarim-bomanga manana loko isankarazany sy lolo manana loko (ny sasany niova hatramin'ny endriky ny elany) isankarazany.
Marihiko fa ny génotype-ny mihitsy no niova.
Ny "proteine" izay fototry ny ADN dia mbola eo andalam-pikarohana lehibe. Maro ny manova azy ireo, eny fa na hazavana kely fotsiny aza amin'ny sasany. Ary fantatsika tsara fa tsy nitsaha-niova ny tany.
Nehemiah - 11/03/2013 08:43
Tsy azonao tanteraka ny tiako ambara. Ny ohatra tsara alaina dia ny DVD. Ny ADN dia mirakitra information, prôgrama maro dia maro entina anaovana zavatra maro samihafa, tena tahaky ny DVD.
Ny ohatra omenao dia momba ny fifantenana natoraly (tsy iny moa no antsoin'ny manam-pahaizana hoe "red queen" tahak'ilay kianja @ lapan'ny mpanjakavavy mena izay tsy maintsy ihazakazahana mba hijanona @ toerana, @ Alice au Pays des Merveilles ?) : lanin'ny fanday ny sarisarim-bomanga, hany ka lasa ny sarisarim-boamanga misy sampona izay mahatonga azy ireo hamokatra an'ilay poizina tsy tantin'ny fanday no mihamaro. Tahak'izay koa ny fanday : lasa ireo izay sendra manana sampona @ ADN'ny mahatonga azy ireo hahatanty ilay poizin'ny sarisarim-bomanga no mandrombona, fa izay tsy manana an'izay dia matin'ny hanoanana, na mora lanin'ny prédateurs satria tsy mahazo sakafo tsara.
Ka zavatra roa no misongadina eo : ny sampona sy ny fifantenana voajanahary. Ary ny fanontaniana mipetraka dia : mba mahavita mamorona informations vaovao ve ireo ?
Ka eto no miditra an-tsehatra ny ohatry ny DVD. Milaza ny mpandala ny evôlisiona fa arakaraky ny ipoiran'ny sampona vaovao izay ahazoan'ny zavamananaina tombontsoa ao anatin'ny tontolo iainany no iovan'ilay zavamananaina tsikelikely ka lasa misy karazana hafa mipoitra, ary tahak'izay no ahafahan'ny mikrôba hivadika ho microbiologue.
Raha ataontsika hoe maka ny DVDn'ny sarimihetsika "Rafozan-tsarotiny" farany aho ka kikisako kely isan'andro vaky dia hipoitra avy eo ny tohitelon'ny "Lord of the Rings" ? Tsia, fa manjary tsy hay vakiana intsony ilay DVD.
Ka tahak'izay koa anie ny sampona : fahasimbàna @ raki-pahalalanan'ny ADN, ary tsy afaka miteraka information vaovao ny fahasimban'ny information. Ny fifantenana natoraly moa dia tsy afaka mifantina afa-tsy izay efa misy eo.
Tsy mandà fa nisy fiovàna ny génotype @ ohatra resahinao. Tsy mandà ny fisian'ny sampona sy ny fifantenana natoraly aho. Fa kosa eken'ny manam-pahaizana mpandala ny evôlisiôna (hatr@'Itompokolahy Stephen Jay Gould, eritrereo anie ! Olona lalin-tsaina tsy misy toy izany !) maro fa olana be ho an'ny fotopisainan'ny evôlisiôna ny fiforonan'ny information vaovao afaka mamadika ny mikrôba ho sahona ho androngo ho totozy ho rajako ho olombelona.
Asakasak'ianao, fa ny fahitako azy aloha dia mifandraika tsara @ filazan'ny Baiboly hoe tsara indrindra ny zava-drehetra t@ voalohany, fa mihasimba tsikelikely ny ADN'ny zavamananaina rehetra vokatry ny fahalovàna nateraky ny otan'i Adama.